दिमाग खियाउँने प्रश्नहरु - के तपाई जवाफ दिन सक्नु हुन्छ ? - ज्ञानविज्ञान
कुन चिजमा टाउको र पुच्छर हुन्छ तर जिउ हुदैन ?
यदि तपाईले यो प्रश्नको जवाफका बारेमा हतार गर्नु भयो भने तपाईले यसको जवाफ कुनै अनौठो जीव जनावार होला भन्ने मात्रै सोच्नु हुनेछ तर यसको जवाफ त्यति सजिलो छैन । तपाईले दिमागमा जोड लगाएर प्रश्नले देखाउँने दिशा भन्दा अर्कै दिशा तर्फ सोच्नु पर्ने हुन्छ । अंग्रेजीमा आउट अफ द बक्स सोच्ने कुरालाई यहाँ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
Don't Miss it उच्च रक्तचाप भएकाले खानै नहुने खानेकुराहरु र उच्च रक्तचापका कारण, यस्ता छन्
Up Next टाइफाइड भनेको के हो ? यसको कारण, रोकथाम, घरेलु उपचार र मुख बार्नु पर्नेकुराहरु